Madoobe & Deni Oo uhiiliyey Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi – XAMAR POST
Madoobe & Deni Oo uhiiliyey Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi
Iyadoo shirka uu furmay ayaa hadana kulamo gaar gaar ah dhinacyada saamileyda Siyaasada waxay la leeyihiin kulamo ashqaasta ay quseyso arinta doorashada.
Madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Siciid C/llaahi Deni iyo Axmed Islaam Madoobe ayaa waxay xalay kulan la yeesheen Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobolada Waqooyi.
Xubnahaasi waxa hoggaaminayey Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), iyadoo shirkaasi looga hadlay xalinta tabashooyinka ka jira kuraasta siyaasiyiinta Somaliland iyo sidii labada dhinac ugu heshiin lahaayeen Guddiga doorashada.
Waxay kale oo ay dhinacyadu isla soo hadal qaadeen Kulankooda Is fahamkii Baydhabo ka dhacay 16-kii Febraayo sanadkaan oo la isla gartay in xubnaha guddiga doorashada Somaliland ay kala qeybsadaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed.
Madoobe iyo Deni ayaa hiil dhaw umuujinaya Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay u arkeen in lagu ciilay siyaasada Dalka aana lasiinin doorkiisii uu ku yeelan lahaa go’aamida Shirarka Masiirka dalka Looga hadlayo maadaama uu yahay shakhsiga ugu sareeya Siyaasiyiinta Soomaaliland kasoo jeeda ee DFS xil ka haya.
Shirka Maalintii labaad Ee Doorashada oo ka dhacaya Muqdisho
DHAGEYSO: Lafta gareen oo Shariif & Murashaxiin kale la kulmay